?Ilaahay iyo annagu xiriir ma lihin? Burcad-badeeda Somalida.! [Akhris …] – Radio Daljir
Laasqoray, Aug 18 – Dhexdhexaadiyihii Masaaridii dhawaan ka baxsaday Laasqoray iyo Burcadbadeeddii haysatay C/waaxid Maxamuud Xasan oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda Daljir ayaa sheegey inay war layaab leh kale kulmeen Burcadda intii ay ku guda jireen hawsha dhexdhexaadinta ah.
C/waaxid ayaa sheegey inay raaceen sarkaalkii haysatay kooxda Burcadda ah si ay u soo arkaan la heystayaasha laguna qaaday laash yar iyagoo xiran min hal Macawis iyo hal Funaanad ka dibna ay la kulmeen la haystayaasha oo aad u murugeysan.
?Intaasi ka dib waan soo laabanay waxaan u sheegnay madixii Burcadda inaan heli karno lacag dhan (200,000$) waxaa ila socday oday laba wiil oo uu dhalay la heysto, odagii ayaa ku yiri madaxii burcadda adeeraw waxaa soo dhaw bil Ramadaan waa intaas oo Ilaahay kuu dambi dhaafaa ee naga qaada intaas oo dadka noo sii daaya, laakiin nasiib darro wuxuu ku jawaabay ninkii Burcadbadeedda madaxda u ahaa aniga iyo Ilaahay wax xiriir ah malihin? ayuu yiri Md, Cabdi waaxid oo la hadlayey Daljir.
Dhexdhexaadiyaha ayaa sheegey in sargaalkii Buracaddu uu qabsaday wakhti kooban si uu uga soo fakaro codsiga ku aadan inay qaataan lacagta loo sheegey dadkana sii daayaan ugu dambeyntiina uu ku adkeystay inuusan ka qaadeyn wax ka yar hal million iyo shan boqol oo kun oo doollar (1,500,000$) ka hor hal saac intii aysan laheystayaashu u awood sheegan Burcadda.
Mas?uulkaan ayaa intaasi ku daray in burcadbadeeddu ka codsatay ergadii reer Masar in la heystaashu joojiyaan Aadaanka faraha badan, kaasi oo Burcaddu dhibsatay.
Cuqubo iyo gaf ay ka galeen xag Alle iyo xag Aadame ayaa ku dhacay burcadda ayuu ku soo xiray hadalkiisa mas?uulkaasi.